Teo Andohan’Analakely tamin’ny 8 ora mahery, afak’omaly alina no nitranga ny fanendahana. Vitsy mpanjifa mantsy ireo taksibe taorian’ny rotsak’orana izay nitranga. Ilay mpamily mpanampy koa toa nasesi-doza fa nanisa ireo vola teny an-tanany.
“Nambanan’ny jiolahy roa antsy ilay resevera fa ny olon-dratsy fahatelo kosa nitsaingoka ireo vola. Ny fahefatra mpanara-maso ny manodidina. Tsy nisy ny naratra fa vao nitabataba ilay mpamily mpanampy dia nentin’ilay mpanamory nirifatra ilay taksibe”, hoy i Mamy Ramanana. Nahita mpitandro filaminana izy ireo tany amin’ny toeran-kafa toa an’Anosy fa sendra tsy nisy tazana teo Andohan’Analakely. Mahomby ny asan’ny mpitandro filaminana manao fanamiana sivily. Andrandrain’ny mpanara-baovao koa ny tsy andehanan’izy ireo ireny fiarany ireny fa fiarakaretsaka na hafa tahaka ny fiandrasany taksibe kendritohina ny atoandro, teny Anosy sy manamorona ny tohatohabaton’Antaninarenina no mety hahajoko mpanendaka.